Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Chivabvu 19, 2020
Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 vava makumi mana nevatanhatu, uye vafa nechirwere ichi, vachiri vana munyika yose.
Nhengo dzedare reNational Asssembly dzinoungana mudare iri muHarare asi pasina nhengo dzeMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa, idzo dzakabuda pachena kuti hadzisi kuzoenda kuparamende kudzamara nyaya yadzo yagadziriswa. Mutauriri weparamende, VaJacob Mudenda, vazivisa kuti paramende ichatanga kushanda svondo rinouya nekupasisa mabhiri emutemo ari pamberi payo.
Nyika nhatu dzeSADC dziri mubazi reSADC Troika on Politics, Defence and Security, dzinosangana muHarare kuti dzizeye mamiriro akaita zvinhu muMozambique.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu oenderera mberi achishora kupambwa nekutochwa kwakaitwa madzimai eMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa.
Mari yebepa itsva inotanga kushanda muZimbabwe, asi nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti izvi hazvisi kuzosimudzira hupfumi hwenyika.
Vechidiki voronga mazano anoita kuti zvinhu zvisanyanyovaomera munguva iyo vakatarisana nechirwere che Covid-19
Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki muZimbabwe panguva iyo nyika yakavharwa pachityirwa kupararira kwehutachiona hwe corona virus, uhwo hunokonzera chirwere cheCovid-19